Baby Hazel lalao ho an'ny ankizy - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Baby Hazel lalao
ny ankizivavy tsy vahiny mba hikarakara ny ankizy, indrindra rehefa tena mahafatifaty izy ireo, toy ny olona maimaim-poana amin'ny aterineto nametraka ny lalao Baby Hazel. Izy nitsikitsiky toy izany, misokatra sy hampahasosotra, izay milalao aminy, dia tena fahafinaretana. No tianao mba hifidy ho Halloween akanjo ho an'ny sombintsombiny, manomana ny sakafo maraina, toerana mba handravaka ny Krismasy. Ao amin'ny vanin-taona mafana Faly erỳ izy nitaingina miaraka amin'ny reniny teo amoron-dranomasina, ary amin'ny ririnina no tafiditra amin'ny hoe mahafinaritra ny ririnina teo an-tokotany. Ianao mahita azy amin'ny mitovy taona, ary mitondra foana ny fiarahana ihany no tsara sy ny fifaliana, na dia ny fitsidihana ny mpitsabo nify, na fivoriana miaraka amin'ny Masina Casper.
Mikarakara ny ankizy amin'ny marary tummy Hazel
Krismasy nofy zaza Hesel
Fanadiovana Time for zaza Hazel
Zaza an-jaza: olana amin'ny mpiray tampo
Toeram-pahasalamana fandroana zazakely Baby Hazel
Hazelan'ny zazakely: fikorontanana
Andron'ny Mpinamana amin'ny Hazaka zazakely
Zazakely Baby Hazel
Zazakely Baby Hazel Spa
Baby Hazel Fahafinaretana an-jaza
Hazelan'ny zazakely: Andron'ny mpirahalahy
Baby Hesel sy ny voatavo antoko
Orana voalohany zaza Hazel
Lalao Baby Hazel tamin'ny Category:
Farany Baby Hazel lalao
Fikarakarana ny hoditra Baby Hazel
Fotoana fanampiana ny zaza Hazel
Fotoana fanasan-jaza Hazel
Ratra amin'ny tongotra Hazel zazakely
Akanjo dokotera Hazel zazakely
Manidina Kitesy Baby Hazel
Boky fitsangatsanganana an-jazakely
Resak'i Hazel sy Neny
Lalao Online Rehetra Baby Hazel lalao ho an'ny ankizy
Ny mampihomehy zazakely
Ny fahazazana dia faly, ny ray aman-dreny manao ny zava-drehetra ny zaza amim-pifaliana, ara-pahasalamana ary tsy mila na inona na inona. Indraindray dia tena sarotra omena, satria izany no asa isan'andro tsy misy Output, fa mijery ny fomba zazalahy kely izany filalaovana mafy mihomehy – dia tena Fifaliana. Rehefa mihalehibe ankizivavy, dia ho mahaliana ny sary an-tsaina ny tenany ho olon-dehibe, milalao amin'ny saribakoly, dia manolotra ny tenany moms izay Ampio ny zazalahy kely izany filalaovana. Ankehitriny sy ny lalao video toy ny Baby Hazel mamela anao hankafy ny fikarakarana ny zazakely mahafatifaty. Nitsiky foana izy, satria ny reniny maka isa-minitra ny fiainany anjara, hanova maloto jaza ho malefaka hoditra tsy harehitry, mandro, mampihomehy kilalao sy ny fanondranana mandeha. Dia atao zatra zazakely Hazel akaiky kokoa ary koa tia famoronana mahafinaritra izany. Jereo fa mibedibedy zavatra mampihomehy izy amin'ny fiteny tsy takatry ny saina ho amintsika. Sarotra ny milaza fa amin'izao fotoana dia te, fa ny tena reniny mahatakatra izany foana tsy misy teny, ary ho anareo amin'ny endrika toro-hevitra miseho ny sary ao amin'ny rahona. Rehefa avy nandinika izy ireo, dia tsotra fotsiny ny fepetra zazalahy kely izany filalaovana sy handray zavatra haingana, raha nitomany i Hazel.
Games Baby Hazel dia tena mora ny fitantanana – Tsindrio fotsiny eo amin'ny zavatra izay tianao hampiasaina sy avy eo amin'ny tany izay tokony hampihatra:
Ny nanolo zaza ambany fandriana,
dia manosotra be fiahiana tanana ny toerana maloto lamba mando
hitafy ny vaovao nanolo, naniraka ny taloha iray tao amin'ny fako
Ny sasany fangatahana mamela anao handany teo amin'ny antokon'i virtoaly rahavavy mahafinaritra maro minitra, nandeha niaraka taminy ho any amin'ny tora-pasika. Voalohany, dia mila hanangona ny zavatra tsy maintsy hotandremana ao anaty harona sy ny sariety, nahita azy tao amin'ny efi-trano ankizy. Teo amin'ny ilany ankavanana hitanao ny asa izay mahasoa ho an'ny mandeha. Ary nahita azy ireo mba hanaiky odezhku sy ny sakafo ao anaty kitapo, ary ny kilalao – ny harona. Oh, ary koa zavatra maro dia tsy maintsy hitondra hatrany Hazel aina nandany fotoana eo amin'ny natiora! Nefa toa ny reniny dia tsy tena zava-dehibe mikasika izany, satria raha ny zavatra rehetra eo amin'ny toerany, dia ento ho any an fiara sy handeha ho any amoron-dranomasina. Sary an-tsaina zaza nalaina avy amin'ny tenany ihany na dia balaonina! Raha vao ny masoandro, fomba fiasa vaovao miatrika – fikojakojana vatana ankizivavy sunblock, misotro azy raha mahazo mafana, mampihatra kilalao manokana sy ny maro hafa.
ny lalao malaza Baby Hazel
Baby Hazel lasa ny tena mpandray anjara fototra ny maro lalao vokatra sy noho izany dia ho manorina trano gingerbread – tsara indrindra amin'ny rehetra, mandehana any amin'ny akanin-jaza sy ny andraikitry ny mpampianatra mbola hikarakara azy. Ao amin'ny ray aman-dreny manampy Thanksgiving izany manarona ny fety latabatra, ary raha afaka manampy azy ianao, dia azo antoka fa ny asa tsara rehetra. Na Halloween fa tsy handeha ianao ka ho tonga amin'ny amin'ny akanjo ho an'ny tanora ankizivaviny, fa manahy ny mpiara-monina mihevitra, fanerena fikororohana ny zava-mamy. Fa na dia mikarakara ny ankizy, dia mbola mitantana ny marary. Fa Hazel nahazo mangatsiaka, ary ankehitriny dia manana tazo, kohaka ary tapaka. Ary izy Toa nampalahelo ny tànany sy mampihatra ny fahalalany rehetra ho enti-mahasitrana ny ankizy madinika. Fa rehefa ho sitrana, dia ho azo atao ny mahita ny TV sy handamina ny antoko, dia tsidiho ny Disneyland, mianatra mahandro sakafo tsotra ka ambarao ny anaran'ny zavatra. Amin'ny Hazel mahafinaritra ny miborosy nify, mihazakazaka manodidina teo an-tokotany ny bitro sy marina hitombo. Avy zaza izany tsikelikely mivadika ho kely andriambavy eo amin'ny akanjo tsara tarehy, mbola mitsiky mandrakizay. Ny fananana mahafinaritra aminy, ary hanangana toe-po ianao, manadino ny alahelo sy ny tsara fiampangana.